Gareen antuutaa: Boombii Har’aa Eenyu Dhoose?Boombiin har’a dho’e ulaagaa kamiinuu sirnuma TPLF-EPRDF keessaa jijjiirama – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosGareen antuutaa: Boombii Har’aa Eenyu Dhoose?Boombiin har’a dho’e ulaagaa kamiinuu sirnuma TPLF-EPRDF keessaa jijjiirama
Boombii Har’aa Eenyu Dhoose?
Gareen antuutaa: Boombiin har’a dho’e ulaagaa kamiinuu sirnuma TPLF/EPRDF keessaa jijjiirama gareen Dr. Abiyyi faa fiduuf carraaqaa jiran kanneen morman malee eenyuunuu ta’uu akka hin dandeenye himamaa jira.
Gochaan kunis hin milkaa’iin hafe malee Dr. Abiyyiin ajjeesuuf akka ta’e tilmaamama. Namoonni keessa beekanii fi ogummaa qaban akka jedhanitti.
1. Boombiin sun nama ogummaa dhuka’aa beekuun malee hidhamuu hin danda’u jedhamee himamaa jira.
2. Boombiin kun kan sa’atii eeggatee dho’u (time bomb) ta’uu tu himama. Sa’atiin itti dho’es Dr. Abiyyi haasaa fixee daqiiqaa muraasa booda dha.
3. Bakki boombiin kun itti hidhame karaa Dr. Abiyyi fi keessummoonni irra darban yammuu ta’u, nama eeyyama qabu duwwaa tu konkolaataa sana achi dhaabuus ta’e boombii sana hidhuuf carraa qabaata jedhu namoonni keessa Beekan.
Waan maraafuu, Dr. Abiyyi Ahmad “waraabeyyii guyyaa” isatti naanna’anii jiran of keessatti hammatee jijjiirraa hawwu sana bakkaan akka ga’uu hin dandeenye boombiin har’aa kun barnootaa fi mallattoo ta’uufii qaba. Hoogganoonni TPLF aangoorraa buufamanii fi fuuldurattis jijjiiramni dubbatamu kun dhiibee dhufee yakkoota hedduu isaan fuulduratti itti isaan gaafachiisuu malu nama tarkaanfachiisu utuu arganii callisanii ilaalu jedhanii of gowwoomsuun garraamummaa siyaasaa (political naivety) ta’a.
Adurree fi antuuta tu ijoollee keenya walitti eerumsiifna jedhanii wal koratani. Adurree tu shamarran antuutaa fuudhuuf gaafata. Jaarsoliin gara lachuu dubbatanii waliigalamee cidha sirbuu eegalan. Hamaamonni adurree gamaaf gamanaan marsanii:
“Marsee qaboo, yaa marsee qaboo!”
yammuu jedhan, gareen antuutaa ammoo:
“Garri keenya eeggataa sirba!”
jedhanii jalaa qabaa turan. Dhumarratti hamaamonni adurree qophiin silaa godhan xumuramuu beekanii qabachuuf yammuu itti utaalan, gareen antuutaa dursanii boolla qopheeffatanii waan turaniif, boollasaanii keessa lixan.
Gareen Lammaa fi Dr. Abiyyi “eeggataa yoo sirban” isaaniif wayya. Shirri 1992 ABO irratti dalagame, isaanirrattis dabalamuu mala.
ONN LIVE:Hirira Finfinnetti waamamee irrattii waan deemaa jiru waxabajjii 23 2018
Breaking News: Hiriira guyyaa har’aa deggersa Muummicha Ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiif jedhamee Waamame irratti boombiin dhohee namoota hedduu madeessuun dhagahame. Kanneen lubbuun isaanii darbellee akka jiran Dr. Abiyyi dhaamsa gaddaa dabarse keessatti beeksiseera. Haa ta’u malee miidhaan qaqqabe hafan akka ta’e ammatti adda hin baane.
Karaa biraatiin Qeerroon “Down Down Wayyaanee!” jechaa akka turan viidiyoon nuuf ergame ni mirkaneessa.
ONN: Waxabajji 23,2018 Walloo Kamisee gootaawwan mana hiraarsaa turanii bahaniif simannaa gootaa, faajjii ABO qabatanii godhaniiruuf
ONN:QEERROON SAGALEE TOKKOON NADHII GAMMADAA FI HIDHAMTONNI SIYAASAA OROMOO NUUF HAA HIKKAMAN .JUNE 23/2018
ONN:QEERROON MASQAL ADABAABAAYITTI ALAABAAN DHIICHISAA JIRAN